Ciidamada UN-ka oo ka howl bilaabay Muqdisho – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
18th May 2014 A warsame Af Soomaali 0
Muqdisho – Mareeg.com: Waxaa maanta Muqdisho si rsmi ah uga howl bilaabay 410 askari oo wata koofiyadda UN-ka, kuwaasoo ilaalinaya xarrumaha Qaramada Midoobay.
Ciidamadan noqnaya ilaalada gaarka ah ee xarrumaha UN-ka ee Muqdisho ayaa waxey ka socdaan dalka Uganda, waxaana manta shaqa galkooda looga dhawaaqay Muqdisho.
Munaasabad lagu qabtay xerada Xalane ee ah saldhiga ugu weyn AMISOM ee Soomaaliya oo ay goob joog ka ahaayee ergayga Qarmada Midoobay ee Soomaaliya, Nicholas Kay, madaxa howlgalka AMISOM, Mohamed Sallah Annafid, wasiirka gaashaandhiga Soomaaliya Maxaxed Sheekh Xasan Xaamud iyo saraakiil ka socotay Uganda ayaa shaaca looga qaaday in laga bilaabo maanta ilaalada UN-ku ka howlgelayaan Mudisho.
Ergeyga Qaramada midoobey u qaabilsan Soomaaliya Nicholas Kay oo ka hadlay munaasabada lagu soo bandhigayay ciidamadan howshooda bilaabay ayaa ammaanay doorka dowladda Uganda ee nabadeynta Soomaaliya.
“Soo daabulidda Cutubka Ilaalada QM waa tallaabo muhiim ah sida aan annaguba usii wadno baahinta howlgalladeena aan ku taageereyno dadka Soomaaliyeed,” Kay ayaa ka sheegay xafladda. “Waxaan aad ugu mahad celineeynaa Uganda oo sii waddo in ay gacan ka geysato dhismaha-nabadda- iyo dalka Soomaaliya”
“Waxaan sidoo kale u mahad celineynaa inta na marti gelisay, Dowladda Federaalka ah iyo dadka Soomaaliyeed, iyo saaxiibadeenna, Howlgalka Midowga Afrika ee Soomaaliya (AMISOM), oo aan uga mahad celineyno taageerada ay siiyaan Cutubka Ilaalada iyo ilaalada ay siiyaan QM,” ayuu ku daray.
Wasiirka Gaashaandhiga Soomaaliya Maxamed Sheekh Xasan Xaamud ayaa sheegay in ciidamadan ay si gaar ah u ilaalin doonaan xafiisyada Qaramada Midoobey, isagoo soo dhoweeyay ciidamadan hoos tagaya Qaramada Midoobey.
Taliye ku xigeenka ciidanka dalka Uganda Charles Angina ayaa sheegay inay ku faraxsan yihiin in ciidamo ka socda dalkiisa ay ku biireen bahda Qaramada Midoobay, wuxuuna sheegay inay sameyn doonaan wax kasta oo ay awoodaan oo lagu xaqiijinayo in Qaramada Midoobay ay awood u yeelato sii wadidda howlaha ay ka hayso Mudisho iyadoo ammaankeeda uu sugan yahay.
“Dowladda Uganda waxaa ka go’an in ay ku taageerto walaaleheena Soomaaliya dadaalka ay ugu jiraan gaarista nabad waatra” ayuu yiri Sarreeye Guud Charles Angina, Taliye Kuxigeenka Ciidanka Dhulka ee ka tirsan Xoogagga Difaaca Shacabka Uganda. “Waa inoo sharaf inaan ku biirno qooyska QM, waxaan sameeyn doonnaa dadaal xoogan si loo xaqiijiyo awood ay QM howsheeda ugusii wadan karto gudaha Muqdisho jawi amaan iyo nabad ah.”
Warsaafadeed ka soo baxay xafiiska Qaramada Midoobay u qaabilsan Soomaaliya ee UNSOM, ayaa lagu sheegay in ciidamada ay si gaar u hoostagi doonaan QM kuwaasoo shaqadooda noqon doona ilaalinta xafiisiyadda iyo shaqaalaha QM ee Muqdisho.
UN Guard Unit begins work in Mogadishu, Somalia